Intloko emafini @ Pictured Rocks / H58 - I-Airbnb
Intloko emafini @ Pictured Rocks / H58
Uya kukuthanda nje ukuhlala kule ndawo yokulala i-3 ibekwe kumgama oziikhilomitha ezi-3 ngaphandle kwe-H-58 ebukekayo. Ibekwe kanye ecaleni kwePictured Rocks National Park, ikubeka kanye embindini wayo yonke into. Iingxangxasi, ukuhamba ngekhephu, ukukhwela intaba, ukuloba, ukukhwela inqanawa, ukuzingela nokunye okuninzi kuya kuba kukungqongile. Kutheni uhlala ehotele xa unokuba nemfihlo yendlu yonke kunye neyadi kuwe. Yonga imali ngokwenza ukutya kwakho ngekhitshi eligcweleyo okanye usebenzisa indawo yokuhlamba impahla (ibandakanyiwe). **Isilwanyana sasekhaya samkelekile**
Izinto eziluncedo ziquka: isitovu, ifriji/isikhenkcezisi, umenzi wekofu (w/izihluzi), itoaster, imicrowave, iwasha yempahla/idryer, iayini/ibhodi yokuayina, iTV eneRoku, iWIFI yasimahla, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, igumbi ngalinye linebhedi yalo enkulukazi. (x3), izinxibo, amagunjana, iifeni zesilingi, ingeniso engenazitshixo ukwenzela ukuba kube lula, wamkelekile kwisilwanyana sasekhaya.
45" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Roku, I-Netflix
4.91 out of 5 stars from 513 reviews
4.91 · Izimvo eziyi-513
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi513
Enye yezinto ezilungileyo malunga nale ndawo kukuba kufutshane kuyo yonke into ejikelezileyo. Nazi iindawo ezimbalwa zokuya kunye nexesha eliqikelelweyo lokuya.
Tahquamenon Falls malunga neyure enesiqingatha, Newberry malunga neyure enye empuma, Marquette malunga neyure enye ngasentshona, Munising ngaphantsi kwe 5 imizuzu, Kitch-iti-kippi malunga 45 imizuzu emazantsi, Manistique malunga 45 imizuzu emazantsi, indawo Miner's Castle malunga 10 imizuzu ngaphandle. , I-Chapel Falls / Indawo yokupaka iiMosquito malunga nemizuzu engama-20 ngaphandle, iGrand Marais malunga neyure eli-1 empuma, Nokuba uhambo losuku ukuya kwiPeninsula yaseKeweenaw alukho ngaphandle kombuzo kule ndawo (malunga ne-2 1/2 iiyure ukuya eHoughton).
Ndiyathanda ukwazi ukuba kukho iingxaki ezichaphazela ukuhlala kwakho. Andikhathali ngokuzama ukunceda ngezalathiso, okanye iingcebiso. Ndiza kuphendula njengoko ndifumaneka.